कोरियामा कोरोना आतंक : सरकार भन्छ उद्वार गर्न असम्भव | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
फागुन ११, काठमाण्डौ । चिनको हुबेइ प्रान्तमा फैलिएको कोरोना भाइरस दक्षिण कोरियामा समेत फैलिए पछि नेपालमा पनि त्रास फैलिएको छ । रोजगारिको शिलशिलामा हजारौ नेपालीहरु दक्षिण कोरियामा छन् । यतिबेला त्यहाँ रहेका नेपाली र नेपालमा रहेका उनीहरुका अभिभावकमा चिन्ता बढेको छ ।
चीनपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट दक्षिण कोरिया पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । त्यहाँका विभिन्न शहरमा तीब्ररुपमा कोरोना प्रभावित बिरामी देखिन थालेपछि कोरियामा रहेका नेपालीहरुमा पनि त्रास बढेको छ । कोरियाका अधिकांश मुख्य शहरमा नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरु छन् । कोरोनाको प्रभाव चीनमा कम हुँदै गएको बताइरहँदा कोरियामा भने महामारीको रुप लिने संकेत देखिएको हो ।
दक्षिण कोरियामा दिप्रतिदिन कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको संख्या बढिरहेको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म ४ सय ३३ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको बताइएको छ । जसले गर्दा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुमा त्रास फैलिएको छ ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिदै गएपछि विदा मिलाएर घर जाने प्रस्ताव गरे पनि कम्पनीले नदिएको त्यहाँ कार्यरत उज्जल सिटौलाले बताए । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै त्रासमा नबस्न कम्पनीले आग्रह गरेको सिटौलाले बताए ।
सियोलस्थित नेपाली दूतावासले कोरियामा रहेका नेपालीहरुलाई विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । यता नेपाल सरकारले पनि दक्षिण कोरियामा कामदा पठाउन रोक लगाएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कोरिया जान तयारी गरेका नेपाली कामदारलाई सरकारले केही समयका लागि जानबाट रोकेको हो । सरकारले चिनको वुहानमा रहेका १७५ जना नेपालीलाई उद्वारगरि भक्तपूर स्थित क्वारेन्टाइनमा राखेको छ ।
१ सय ७५ जनालाई उद्धार गर्न सरकारलाई फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन भएको थियो । कोरियामा ५० हजार हाराहारीको संख्यामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गरेर नेपाल ल्याउन सम्भव देखिदैन । तर त्यही कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बारे नेपाल सरकार र त्यहाँस्थित दुतावासले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । हजारौँ नेपाली भएकाले उद्धार गर्न नसकिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनमा झण्डै दुई महिनादेखि महामारी नियन्त्रणमा नआइरहेका बेला अस्वभाविक रुपमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा बृद्धि भएपछि दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य उपमन्त्री किम गाङ लिपले कोरोनाभाइरस प्रकोप एउटा गम्भीर चरणमा प्रवेश गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कोरियाको सियोलस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी थेगु सहर प्रभावित छ । यो शहरमा करिब १ हजार नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको दूतावासले जनाएको छ ।
अमेरिकामा कोरोना संक्रमित ४ लाख नाघ्यो, मृतक १३ हजार नजिक
एजेन्सी, २६ चैत्र । अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार
भारतीय अर्बपतिको कम्पनिले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन विकास गर्न सक्ला ?
साइरस पुनावाला खानदानी धनाढ्य हुन् । उनी भारतको सर्वाधिक धनाढ्यमा सातौं नम्बरमा पर्छन् । पुणेमा
तातो पानी पिउने र दैनिक योग गर्दाको फाइदा
कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त बनेको बेला शरीरमा प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई स्वास्थ्य राख्नु निकै महत्वपुर्ण हुन्छ
आँखा झिम्काउँदा हाम्रो दिमागले कसरी काम गर्छ
आँखा एक पटक झिम्कदा ०.१ बाट ०.४ सेकेन्डको अवधिमा हुन्छ । औसतमा यस्ले लिने अवधि
कोरोना संक्रमणबाट न्युयोर्कमा नेपाली मूलका ङिमा शेर्पाको निधन
न्युयोर्क, २६ चैत्र । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट न्युयोर्कमा आज विहान नेपाली मूलका ङिमा तेम्बा शेर्पाको
जापानमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्यामा बृद्धि
२६ चैत । जापानमा संकटकाल घोषणा गरेपछिको पहिलो दिनमै कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरुको संख्या झन धेरै
सुलभलाई हिरासत कालोबजारीको सुत्रपात मन्त्रीलाई बचाऊ किन ?
रीता खनालः हिजो शंकर ग्रुपका एक व्यापारी सुलभ अग्रवाल ले बजार मा ५००० मूल्य भएको